Notsapainay ny Alcatel GO Play, fitaovana mahazaka tena | Androidsis
Amin'ity fanontana ny IFA any Berlin ity, mpanamboatra frantsay Alcatel dia nanapa-kevitra ny hiloka amin'ny mpijery tena manokana: ireo izay manao fanatanjahan-tena mampihetsi-po ary maniry fitaovana mahatohitra sy mandeha.
Efa hitantsika ny Go Watch mahaliana, fitaovana iray izay miavaka amin'ny fanoherana ny vovoka sy ny rano ary koa ny fahatsorany. Ankehitriny dia anjaran'ny Alcatel OneTouch GO Play, fitaovana natao ho an'ny adventurous indrindra.
1 Alcatel OneTouch GO Play, telefaona mahatohitra vovoka sy rano
2 Toetra ara-teknika an'ny Alcatel OneTouch GO Play
Alcatel OneTouch GO Play, telefaona mahatohitra vovoka sy rano
Alcatel dia nanaitra anay tamin'ny Alcatel OneTouch GO Play. Nanararaotra nisedra azy izahay ary tena tsara ny fahatsapana. Mazava ho azy fa tsy premium ny famaranana azy, tsy izay tadiavinao amin'ny telefaona an'ity karazana ity.
Ny tena mahavariana dia ny Alcatel OneTouch GO Play dia finday avo lenta, mahatohitra tena. manomboka ny fonony vita amin'ny rubbery dia hanakana ny telefaona tsy ho vaky noho ny fianjerany tsy nahy.
Raha ity dia ampiantsika fa i Alcatel dia nanome ny Alcatel OneTouch GO Play miaraka aFanamarinana IP67 izany dia manome antoka fa maharitra hatramin'ny 30 minitra ny findainao vaovao amin'ny halalin'ny 1 metatra, ankoatran'ny tsy mahazaka vovoka, satria manana telefaona mahazaka ny lalan'ny mpitsangatsangana rehetra isika nefa tsy very ny volony.
Toetra ara-teknika an'ny Alcatel OneTouch GO Play
Fitaovana fananganana fiantraikany mahatohitra polycarbonate
efijery 5 santimetatra misy vahaolana 1280 x 720 sy 294 dpi
Kardan'ny micro SD Eny hatramin'ny 32GB
Fakan-tsary aoriana 8 megapixels
Fitaovana hafa Fanamarinana IP67 // mahatohitra ny fahatairana
Ny fahatsapanay voalohany dia tena tsara rehefa nandinika ny tsena an'ity telefaona Alcatel ity izahay. Ary raha heverintsika fa ny Alcatel OneTouch GO Play dia azo antoka fa ambany ny vidin'ny 250 euroSafidy tokony hodinihina raha mitady finday matanjaka sy maharitra ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » IFA » Alcatel OneTouch GO Play, famakafakana video an'ny smartphone Alcatel vaovao
Jacobo tatay dia hoy izy:
Akory ny hatsaran'ny tolo-kevitra vaovao avy amin'ny ALCATEL ONETOUCH! Indrindra ny tsipika GO shockproof (smartwatch + smartphone). Heveriko fa amin'ity tranga ity, ny marika dia miloka betsaka amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena, mamorona fitaovana mifanaraka tanteraka amin'ny olona manana sehatra fanatanjahantena. Ny mpandresy amin'ny fianjera manaraka dia ilay mpivady noforonin'ny famantaranandro sy ny telefaon'ilay andalana iray ihany. Ho fanampin'izay, voalaza, ALCATEL ONETOUCH dia handray anjara amin'ny tsipika mitovy amin'izany, ary mamela ny haitao tsy mety vaky ho azon'ny tsirairay.
Valiny tamin'i Jacobo Tatay